sawehlor: Advanced SystemCare - နေမင်းမောင်
Advanced SystemCare - နေမင်းမောင်
Source : နေမင်းမောင်
ကျွန်တော် Advanced SystemCare Pro ကိုနောက်ထပ် Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ဆိုတာကို ဘာမှန်း မသိခင် အချိန်တည်းက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ကောင်းတယ် ဆိုတာနဲ့ သုံးကြည့်ရင်း အကြိုက်တွေ့သွားလို့ နောက်ပိုင်း အမြဲသုံးဖြစ်ခဲ့ တဲ့ကောင်လေးပါ .. ကျွန်တော် စသုံးခါစကတော့ ဘာမှမသိသေးတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ Free Version လေးပဲ သုံးခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ .. အခုတော့ အရင်တုန်းကနဲ့ ကိုနောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ Version တွေက ပုံစံချင်းက အစ မတူတော့ပဲ Pro Version အနေနဲ့ သုံးမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် လန်းလန်းလေး သုံးလို့ ရပါသေးတယ် .. ကျွန်တော် အခု နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ Version လေးကိုလည်း Pro Version လေးနဲ့ သုံးချင် သူတွေအတွက် Key လေးပါ ထည့်ပေးထား ပါတယ် ..ကျွန်တော် အောက်မှာ Pro Version လေးမှာ ပြောင်းလည်းပြီး အသုံးပြုလို့ ရမယ့် Skin ပုံစံလေးတွေရယ် Pro Version ကိုအသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် ဘယ်လို Upgrade လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Advanced SystemCare Pro ကို မိမိတို့ စက်မှာ Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် Free Version လေးနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ .. Pro Version အနေနဲ့ သုံးချင် သူတွေကတော့ အောက်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားသလို Upgrade ပေးပြီးသုံးယုံပါပဲ ... အရင်ဆုံး Upgrade မပေးခင် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Internet ဖြုတ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ..
အောက်က ပုံအတိုင်း ကျွန်တော် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Key လေးကို ထည့်ပေးလိုက် ယုံပါပဲ ..
အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် OK မပေးပဲ Close လိုက်ပါ ..
အားလုံးပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Advanced SystemCare ကို Pro Version လေးအဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရသွား ပါလိမ့်မယ် ..
လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
Posted by saw ehlor at 10:17
Adobe Photoshop CS Portable AIO:CS1/CS2/CS3/CS4/CS...
Google Chrome မှာမြန်မာလိုဖတ်လို့ရအောင် - နေမင်းမောင်
အသံထွက် အင်္ဂံလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် - ကောင်လေးငယ်
Internet Download Manager - နေမင်းမောင်
RECYCLER virus ကိုဘယ်လိုသတ်မလဲ
Partation တွေထဲက shortcut virus ကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲ
who is Aung San? What is his Speech? part 1
Who is Aung San? What is his Speech? part 2